क्याविनेटमा ओलीको बोलीः ‘विदा हुने मन भए मार्ग प्रशस्त छ’
काठमाडौं।मिर्गौलाको नियमित डायलाइसिसपछि अघिल्लो सोमबार बसेको अहिलेसम्मकै सबभन्दा लामो (चार घण्टाको) क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना मन्त्रीहरुप्रति अत्यन्तै आक्रोशित र असन्तुष्ट देखिएका थिए।
उनले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केहीलाई निरन्तरता दिएर तीन महिनाको ग्रेसमार्क दिइएको बताउँदै बिदा हुन मन भए मार्ग प्रशस्त रहेको बताएका हुन्।
उनको भनाइ थियो, ‘सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पुग्न लागेको बेला मिडियाले थुप्रै कुरा लेखेका छन्। कतिपय सन्दर्भ आलोचनात्मक, आक्रोशपूर्ण र अतिरञ्जित पनि छन्। तर केही प्रशंग मिलेका पनि छन्। मन्त्रीहरुको कार्यशैली, कार्यसम्पादन, प्रस्तुती चित्त नबुझ्दो भएको कुरामा म पनि सहमत छु।’
‘कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिएको छैन। अब यस्ता कुरा सह्य हुँदैन,’ प्रमले बैठकमा तितो पोखे। उनले कड्किएर भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ। अब मलाई देखिनेगरी परिणाम चाहिन्छ। मन्त्री हुने अनि एमसीसीजस्तो परियोजनाको विरोध पनि गर्ने? यो कुरा सह्य हुँदैन।’
एमसीसीबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालय या परराष्ट्रको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरा थियो। तर, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले ‘पहिले संसदीय दलमा छलफल गरौँ, आफूभित्रै एकमत कायम गरेपछि पत्रकारसम्मेलन गर्नुनपर्ला’ भन्ने कुरा उठाए।
यो समाचार आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छ।
उठ ! ‘आमा’ खोज्नेहरु
सभामुख सापकोटाविरुद्धको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन आदेश